Tag: kushandiswa | Martech Zone
Svondo, Gunyana 9, 2012 Svondo, Gunyana 9, 2012 Douglas Karr
Ipo iyo Internet ichiri kuramba ichichinja uye yaingova aripo kwemakumi mashoma emakore, nyika inonyatsoziva maitiro ekugadzira yakakura yevatengi ruzivo. Kufanana pakati penzira yaunobata nayo vatengi uri munhu uye nemabatiro aunovaita pamhepo zvakangofanana paunenge uchiedza kugadzira ruzivo rwevatengi rwekupedzisira. Infographic neMonetate: Vatengi vanotarisira zvakanyanya-zvinoenderana kudyidzana kwepamhepo nemhando. Kune akawanda mabhizinesi, kugona kuendesa iyo
Muvhuro, April 16, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Lemonhead yakagadzira iyi hukuru infographic kurerutsa maitiro ekuronga, kugadzira uye kugadzirisa yako webhusaiti. Iyo infographic inokutora iwe kuburikidza neese eayo matanho matatu uye inosanganisa usability, hutongi, kuyedza, kusarudzwa kwemazwi akakosha uye zvimwe zvakakosha kuisa. Kuronga, dhizaini uye kugadzirisa webhusaiti yakareruka neinternet matanho. Webhusaiti yakareruka infographic dhizaini inzira yewebhusaiti dhizaini nenzira yakareruka uchishandisa kuronga kunoshanda, dhizaini dhizaini uye kuita kwehurongwa. Chidimbu chimwe
Jon Arnold anoita basa rinoshamisa achitsanangura zvinoitwa nekambani yake, Tuitive = Usability. Kune mamwe maficha anoshamisa kunze uko asingamboone mwenje wezuva. Iko kunyorera kunogona kugadzirisa zvimwe zvinhu zvakaoma kwazvo, asi kana pasina munhu anogona kunyatso funga mashandisiro azvinoita, kusiiwa kunenge kwakakwira uye kutengesa kuchanetsa. Vatengesi vemaki, mamaneja ezvigadzirwa uye vanogadzira graphic vanowanzo tarisa kutaridzika uye kunzwa kwekushandisa Kushandisa ndiko